Imibono Emisha Yebhizinisi: Imibono Engakwenza Unothe | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 20/05/2021 07:26 | Ibhizinisi
Umuntu unenye yezingqondo ezinhle kakhulu emhlabeni. Siyakwazi ukusungula lokho esikuphuphayo, futhi noma kungasithatha iminyaka ukukufeza, siyakwenza kufezeke. Kepha futhi uyakwazi ukudala imibono yebhizinisi emisha. Akudingeki ukuthi babe ngabantu abajwayelekile, vele babe nalokho "kukhanyiselwa okuncane" ukuze babone amandla okuthola okuthile abanye abangakakuboni.
Kodwa, Ungayakha kanjani imibono yebhizinisi emisha? Bangaba yini? Namuhla sikhuluma ngalezo zinto ezincane ezingakwenza ube mkhulu kakhulu (futhi ngokwenzekayo zikusize uphume ekuwohlokeni komnotho obhekene nakho).
1 Imibono emisha yebhizinisi
1.1 Omatilasi abahlakaniphile
1.2 Ukwelashwa kwengqondo etekisini
1.3 Amakamelo amahhotela ezikhumulweni zezindiza
1.4 Imibono Emisha Yebhizinisi: Odokotela Basekhaya
1.5 Barter iwebhusayithi
1.6 Imibono Emisha Yebhizinisi: Yaziwa Usuku
Eminye yemibono yebhizinisi emisha iqinisekile ukukhala insimbi ngoba yethulwe. Futhi, njengoba sisho, kwanele ukuthi umuntu akholelwe kulowo mbono ukuze ugcwaliseke. Futhi uma futhi kungumsebenzi ongaxazulula noma wenze ngcono izimpilo zezigidi zabantu, impumelelo iqinisekile.
Umqondo omusha Akudingeki ukuthi ibonwe njengento engakaze isungulwe. Kwesinye isikhathi, kuyadingeka kuphela ukucabanga ngemikhiqizo eyenza impilo yethu izole, ijabulise noma ikhululeke; noma kubuchwepheshe obusenza sicabange ukuthi "ikusasa" esilibonile kumafilimu eqanjiwe esayensi selivele likhona. Eminye ingahle ibe yimibono eyisisekelo kangangoba uyazibuza ukuthi kungani bengakaze bayisungule ngaphambili.
Ngabe ufuna ukuthi sikushiyele eminye imibono? Nakhu baya:
Uyazi vele ukuthi ukulala kubalulekile osukwini lwethu nosuku. Uma ungalali kahle, ngeke usebenze, futhi futhi ungaba "nomoya wezinja." Kungakho ukuphumula kubaluleke kangaka. Inkinga ukuthi, kwesinye isikhathi, asikwazi ukukwenza yize sinomatilasi abakahle, ukuthi silala masinyane nokuthi sithola izinkinga emakhanda ethu.
Kulokhu kufanele sengeze ukuthi, uma ulala nothile, uhlala unenkinga yezingubo zokulala, noma ngabe kuyashisa noma kuyabanda kuye, njll. Umbono webhizinisi omusha? Yenza omatilasi abahlakaniphile abakunikeza kumuntu ngamunye isikhala sakhe. Ukuthi abahlali lapho omunye umuntu ehamba, ukuthi balawula ukushisa kukamatilasi ukuthi kube nokushisa okungaphezulu noma okuncane, njll.
Ukwelashwa kwengqondo etekisini
Yebo, siyazi ukuthi eSpain ukuthatha itekisi akuvamile kakhulu, kepha kusenziwa (uma kungenjalo, bebengeke babe khona osomatekisi abaningi). Iqiniso ngukuthi kaningi, mhlawumbe ngenxa yokuthi kungumuntu ongaphandle kwethu, siyabavulela, bese beba uhlobo lochwepheshe bezengqondo ngoba bayasilalela futhi basinikeze ibinzana eliyinqaba elisenza sicabange.
Futhi bacabangeni? Dala kahle i- imikhumbi yamatekisi aqhutshwa ochwepheshe bezengqondo ukuze amaklayenti afinyelele lapho eya khona kepha, ngaphezu kwalokho, anganikeza usizo, njengochwepheshe wezengqondo isikhathi sohambo. Futhi qaphela, akuyona into evela komunye umhlaba, empeleni, eStockholm, sebevele beyethule futhi iqiniso ukuthi iphumelela kakhulu. Kungani kungasebenzi eSpain ngendlela esivuleke ngayo?
Amakamelo amahhotela ezikhumulweni zezindiza
Phakathi kwemibono emisha yebhizinisi esinayo. Lawa ngamakamelo amancane aphindeka kabili njengamakamelo amahhotela. Inhloso yayo? Ake ucabange ukuthi uzobamba indiza bese kuvela ukuthi ikhanseliwe, imisiwe ... futhi awazi ukuthi uzondiza nini. Hhayi-ke esikhundleni sokulinda esikhumulweni sezindiza, ezihlalweni ezingakhululeki kakhulu kukhona, ezingakwazi nokulala kahle noma uphumule, unga sebenzisa lezi zindlu zehhotela ukuze uphumule futhi ube nemfihlo encane.
Ingenious, akunjalo? Impela kuzokwazi ukunika amandla isikhala ezikhumulweni zezindiza ukuze kube namakamelo amaningana ahlelwe, ngendlela yokuthi ukuphoqeleka ukuhlala esikhumulweni sezindiza kwenziwe kube mnandi.
Imibono Emisha Yebhizinisi: Odokotela Basekhaya
Impela sekungaphezu kwesisodwa wenze isikhathi sokubonana nodokotela futhi, lapho usuku selufikile, ubungafuni ukuphuma endlini ngoba ubenethezekile, ngoba belina noma ngoba nje ungazizwa kufanele uye kwenye indawo ngenkathi ngisekhaya.
Ngakho, Kungani ungafikanga udokotela ezokubona? Ukuvakashelwa emakhaya odokotela kusiza iziguli ukuba zikhululeke kakhudlwana futhi zizole. Kuyiqiniso ukuthi abanazo zonke izinsimbi abazidingayo ... noma banazo? Kulezi zinsuku odokotela bakulalela kuphela, abavami ukwenza okunye okuningi. Futhi lokho kwenza lo mbono usebenze kakhulu.
Vele, kwizivivinyo akuthumela zona, kuzofanele uphume, kepha ukukhuluma naye akudingekile ukuthi uye kuye kunokukwenza kuwe. Ngakho-ke gwema ukulinda ezindaweni zakwamanye amazwe ngoba kuzofika endlini yakho futhi ngenkathi ungenza ezinye izinto.
Eminyakeni eminingi edlule, ukushintshanisa kwakuyinto yansuku zonke. Kwakungekho mali futhi kwakuyizimpahla umuntu ayenazo ezazisebenzela ukuthi zikwazi ukushintshanisa nezinye ezazidingeka. Ngakho-ke, wonke umuntu watshala imfuyo eyaluswayo, njll. ngoba ibisebenza njengenhlangano yokuxoxisana.
Manje, asicabangi ukukutshela ukuthi ubuyele kulokho, kodwa Impela endlini yakho unezinto eziningi ongasazifuni, futhi ufuna izinto eziningi ongenazo. Ngakho-ke kungani ungashintshi? Sikhuluma ngokuthatha ongasakufuni futhi ukunikeze ekhasini ukuze ushintshe izinto ozifunayo. Ngakho-ke wonke umuntu uyanqoba ngoba uzoyinika kuphela labo bantu abanakho okudingayo.
Imibono Emisha Yebhizinisi: Yaziwa Usuku
Uma ubona izinkanyezi zaseHollywood, lokho kunakwa abakunikeza kona kukwenza ube nomona, akunjalo? Ubabona bephelele kakhulu, ukuthi banemali yakho konke okwenza impilo yakho ingabi yinhle njengoba ubucabanga futhi ulangazelela eyabo.
Kepha kuthiwani uma uzama? Phakathi kwemibono yebhizinisi emisha kufanele udume usuku. Kusho ukuthini? Kulungile Gqoka, hamba njengoba kwenza osaziwayo (ezimotweni, ama-limousine), ukuthi ipaparazzi isondele kuwe futhi ifuna ubatshele okuthile, okufanele unikeze izitatimende ...
Ungakucabanga ukuphila konke lokho? Yebo, kufanele wazi ukuthi kwelinye izwe basungule inkampani enjalo, ukusiza abantu ukuthi babhekane nalokho okudume ngakho, ingxenye enhle nengxenye embi (ngalolo suku ngeke ube nemfihlo). Futhi ngale ndlela abantu bayahlola. Futhi qaphela, okuhlangenwe nakho ngakunye kwakho kubiza ama-euro angama-800. Ngakho-ke kuwumqondo omuhle ukuthola imali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ibhizinisi » Imibono emisha yebhizinisi
Izicelo zokuthola imali